Viruska Corona Oo U Gogol-Xaaraya Inu Quwadaha Waaweyn Dikhsi Ka Dhigo .. Turkiga Islaamka Oo Markale Ku Haminaya Inu Dib U Gumeysto Yurub .. Eeshya-Afrika Dabar Ku Xiro
Haddi Taariikhda dib loogu laabto Sannadkii 540 – 541 oo ahayd 30-Sano ka hor dhalashadii Nebi Muxammed (SCW), Boqortooyadi Bariga Roomaaniya (Byzantine) waxaa ka dillaacay Daacuun loo bixiyey "Justinian" oo xitaa ku faafay Boqortooyadi kale ee loo oran jiray Sasanian ( Furus) iyo dhul aad u ballaaran.
Cudurkaas waxa uu dilay boqolkiiba 40% Dadkii deggenaa magaalada caasimadda Bariga Roomaniya- Byzantine u ahayd ee Qustantiiniya (Constantinople), oo ah magaalada markan dambe loo bixiyey Istanbul ee dalka Turkiga .. Guud ahaan adduunkana Dadka uu ku dilay cudurkaas waxaa lagu qiyaasaa in ay boqolkiiab 13% illaa 26% ka ahaayeen dadkii markaas ku dhaqnaa.
Cudurkaas waqtigaas dhacay waxa uu dhaqaale ahaan iyo Dad ahaanba daciifiyey labadi Boqortooyo ee Roomaanki iyo Fursiga oo quwadii markaa jirtay ahaa. Waxaana daciif-nimadoodi sabab u noqday in ay kafadihii amase miisaanki Quwadda adduunka is badalaan. Taas oo la aaminsan yahay in ay u gogol-xaaray in labadaas Quwadoodba ay aakhirkii ku burburaan gacantii Muslimiinta.
Haddaba maadaama oo uu Dadku yahay khayraadka ugu weyn ee uu Dal leeyahay, waxaa maanta mar kale soo baxday in kala sarrayntii Adduunka ee Dhaqaalaha, Aqoonta iyo Cududda Ciidanku ay u kula adkaysi iyo manfac badantahay sida uu Dal kastaa ugu diyaarsan yahay masiibooyinka dadkiisa yaraynaya, una dhisay kaabayaasha muhiimka u ah nolosha bulshadiisa ee caafimaadku ka mid yahay.
Waa sababta ay u muuqato in xaaladda ka dhalata Coronavirus ay dhulka dhigi-doonto Dalal cududda Dhaqaale iyo Milateri kaalimaha hore kaga jiray. Laakiin ay waqti ku qaadan doonto in ay ka soo kacaan dhaawaca gaaray, halka ay kor u soo qaaddi doonto Dalal hore loo quursanayey. Waana laga yaabaa in Coronovirus uu abuuro xaalad bilow u noqota isbeddel ku yimaadda miisaanka Quwadaha adduunka. Taas oo haddii ay timaaddo, sida xaal hadda yahayna ay ku sii socoto ay hubaal tahay in dalal uu Turkey ka mid yahay dalalka kaalin fiican ka ciriirsan doonaan isbeddellada quwadaha ee imanaya.
Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayey sida uu dalkiisu taariikhda wax uga baranayo ee uu isugu diyaariyey in uu mar kale ka faa’iidaysto isbeddel yimaaddaana waxa uu yiri, "Xanuunka Coronavirus kaddib, adduunku waxa uu gelayaa marxalad ka duwan tii jirtay xanuunka ka hor. Waxaa dhismi-doono nidaam caalamiya oo cusub, Siyaasad ahaan, Dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba. Turkiguna marxaladdaaas cusub waxa uu la geli doonaa u diyaarsanaan aad u weyn iyo kaabayaal awood badan”
Fiiro Gaara: Sayidinaa Sayid Cali Bin Abidaalib RC ayaa xikmad ahaan laga soo wariyey in Musiiba-kasta oo dhacda ay soconeyso illa hadafki amase ujeedadi laga lahaa ay gaarto, sidaa awged ma aha in laga hordhaco amase laga cawdo mar haddi laga hortagi waayey inteysan soo bixiin masiibadaas.